वृक्षरोपण भएका ५ करोड विरुवाको संरक्षण कसरी हुन्छः कोमल ओली |
वृक्षरोपण भएका ५ करोड विरुवाको संरक्षण कसरी हुन्छः कोमल ओली
On: २०७६ असार १७ गते, मंगलवार, ०३:१३ बजे प्रकाशित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सांसद कोमल ओलीले मन्त्रालयले ५ करोड वृक्षरोपण गर्नेगरी थालिएको अभियान अत्यन्त राम्रो अभियान भएको बताएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले वृक्षरोपणलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ या विरुवा हुर्काउने कार्यक्रम के छ ? ति विरुवाहरुको संरक्षण कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी हुन् ।
बजेटले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र त्यसको लाभ जनताले पाउनुपर्ने माग राखिन । बजेटमा वन मन्त्रालयको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १५ अरब रुपैया विनियोजित भएको अवस्थामा मुलुकको वन क्षेत्र बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
हराभरा वनहरु समेत अस्तव्यस्त भएको काठहरु जङगलमा नै कुहिएको अवस्था छ त्यस्को संरक्षण कहिले हुन्छ ? काठहरुको सदुपयोगको कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले कहिले ल्याउने भन्दै प्रश्न गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना उहाँ एक्लैको नभएर सम्पुर्ण नेपालीको भएको र उक्त सपना पुरा गर्ने सबै मन्त्रालय लाग्नु पर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।
संसदमा बोदै ओलीले विभिन्न जिल्लाका मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट थुपार्ने गरेको भन्ने आरोप लागेको प्रसङगलाई कोट्याउदैँ सबै मन्त्रीहरुलाई आफ्नो जिल्ला भन्दा पनि हाम्रो भन्ने सोचाईका साथ अगाडी बढ्न आग्रह समेत गरेकी छन् ।
२०७६ असार १७ गते, मंगलवार, ०३:१३ बजे प्रकाशित